﻿	ဒီဆေးကငါ့ကိုကင်ဆာဖြစ်စေမလား။? | Find My Method
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဆေးလုံး » ဒီဆေးကငါ့ကိုကင်ဆာဖြစ်စေမလား။?
သင်ကျန်းမာနေပါက၊ သန္ဓေတားဆေးသည်အလွန်ဘေးကင်းသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား လတ်တလောပြသနာအချို့ (ရာသီလာများ၍သွေးအားနည်းရောဂါရသကဲ့သို့) နှင့် နောက်ပိုင်းဘဝတွင် (သင့်အားကင်ဆာရောဂါအချို့မှကာကွယ်ရန်) သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။.